सांमुद्रिक शास्त्र का अनुसार जुन मानिसहरुको दाँतको बिचमा खालि भाग हुन्छ उनिहरुको भाग्यफल तथा स्वभाव कस्तो हुन्छ भनेर एक प्रकारको टिप्पणी गरेको छ । शास्त्रको मान्यता अनुसार शरीरको माथि देखि तल सम्मको शरीरको बनावट हेरेर नै सबै कुराहरु पत्ता लगाउन सकिने बताइएको छ । जस्तै उनिहरुको स्वभाव, चरित्र तथा भुतकाल तथा बर्तमान र भविष्यको अन्दाज लगाउन सकिने बताइएको छ आजको श्रृङखलामा दांतको बिच भागमा खालि ठाँउ हुने मानिसहरुको भाग्य तथा स्वभाव कस्तो हुन्छ सो कुरा पढ्न सक्नु हुनेछ ।
Prevलोकसेवा आयोगमा खुल्यो यस्तो र’हस्य ! यी बाबुको बढुवा र ग्रेड वृद्धि रोक्का, छोरीको सरकारी जागीर चै’ट !
Nextजो रोजगारीका लागि दुबई जान झोलागुन्टा कसेर आइतबार राति सुतेका थिए…तर उठ्नै नपाई अ’स्ताए
६ कक्षाकी विद्यार्थीले होस्टलमै बच्चा जन्माईन्, हेडसर गिरफ्तार !